के हो त यो आइस बकेट च्यालेन्ज?
ALS को बारेमा चेतना फैलाउनको लागि कसैले एक (वा त्यो भन्दा धेरै) चिसो बरफ पानी आफ्नो शरीरमा खनाउने गर्द्छन र आफ्ना परिवारजनहरु वा साथीहरुलाई त्यस्तै गर्न चुनौती दिइन्छ । र यदि त्यस्तै गर्न नसकेमा सो व्यक्तिले ALS संस्थालाई $१०० चन्दाको रूपमा बुझाउनु पर्छ भनेर चुनौती राखिन्छ ।
ALS भनेको के हो त ?
ALS अर्थात Amyotrophic lateral sclerosis (अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस) जसलाई Lou Gehrig’s Disease (लु गेहरिग रोग) पनि भनिन्छ; यो मस्तिष्क र मेरुदण्ड (स्पाइनल कर्ड ) का स्न्यायु कोष (nerve cells) हरुमा असर गर्ने एक प्रगतिशील रोग हो ।
मानव शरीरमा धेरै किसिमका स्नायुहरु (nerves) हरु हुन्छन ; केहीले सोच्न, स्मरण गर्न, चिसो-तातो महसुस को प्रकृयामा काम गर्दछन् भने केहीले हेर्न, सुन्ने र इत्यादी काम गर्दछन् । कसैलाई ALS भएको छ भने उसको मोटर स्नायुको कोष (motor neurons) मा असर परेको हुन्छ; मोटर स्नायुको कोषको काम हाम्रो मांसपेशीहरुमा शक्ति प्रदान गर्नु हो जसले गर्दा हामीले आफ्नै इच्छाले हाम्रा मांसपेशीहरु चलाऊन सक्दछौँ। आफ्नै इच्छाले चलाऊनु भन्नाले उदाहरणको लागि केही टिप्न परेमा आँफैले कोशीस गरेर टिप्न सक्ने, कतै टेक्न परेमा आफ्नै इच्छाले टेक्न् मिल्ने, आदि । मोटर स्नायुका कोष मस्तिष्कबाट मेरुदण्ड सम्म र मेरुदण्डबाट शरीरमा रहेका मासंपेशीहरुमा छरिएका हुन्छन्।
त्यसैले ALS ले कसैलाई असर गरेको छ भने उसको मोटर स्नायु कोषहरु बिस्तारै मर्दै जान्छन् र त्यसैले गर्दा मस्तिष्कले मांसपेशीहरुको नियन्त्रण गर्न कम हुँदै गएर हराएर जान्छ र त्यसले गर्दा स्व-इच्छा चलाऊने क्षमता कमजोर हुँदै गएर पूर्ण रूपले प्यारालाइसिस हुने गर्दछ। यसले हात-खुट्टा चलाऊने साथै बोल्ने, निल्ने र सास फेर्ने काममा सघाउने मांसपेशीहरुलाई असर गर्दछ। बिस्तारै यी मांसपेशीहरु सानो सानो हुँदै जान्छन् र यसले गर्दा मृत्‍यु सम्म पुर्‍याउने गर्दछ।
के कारण ले हुन्छ त ALS? यसको उपचार केही छ कि?
यसको कारण के हो अहिले सम्म बुझ्न सकिएको छैन र हालसम्म यसको उपचार पनि पत्ता लागिसकेको छैन । तर यसको प्रगतिलाई ढिलो गराउनको लागि केही औषधीहरु भने छ। हालमा अनुसन्धानहरु भइरहेको छ भने कसरी व्यवस्थापनको लागि कोशिश भने भइरहेको छ।
यो अाइस बकेट च्यालेन्ज कसरी सुरु भयो त?
२९ वर्षीय पिट फ्रेट्स, जो एक बेसबल खेलाडी हुन्, उसलाई २०१२ सालमा ALS देखा परेको थियो उसैले नै यो रोगको चेतनाको लागि साथै ALS Associaton संस्थाको लागि अनुसन्धान, सेवा र शिक्षाको लागि, चिसो पानी खनाएर सर्वसाधारणहरुलाई जगाएर चेतना गर्ने यो च्यालेन्ज सुरु गरेका हुन्।
संस्थाको अनुसार पिटको आह्वानले आजको दिनसम्म मा लाखौं चुनौती पुरा गरेको छ भने १५ मिलियन डलर भन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको जानकारी गरेको छ।
ALS बारे थप जानकारीको लागि: http://www.alsa.org/